Imibono yokuhlobisa ye-DIY yamakamelo okulala | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Imisebenzi yezandla ivuliwe | 25/09/2021 10:22 | Imisebenzi yezandla yasekhaya
Okokuhlobisa amakamelo okulala ungakhetha phakathi kokuthenga izinto ezahlukahlukene ofuna ukuzibeka, njenge isihlalo semoto noma isibani setafula, kanye nokwakha izingcezu zakho. Kulesi sihloko sibona ezinye Imibono yokuhlobisa ye-DIY yamakamelo okulala ongakwenza ngezandla zakho ukuze unikeze ukuthinta komuntu siqu kulelo gumbi elisondelene.
1 Izembozo zomkhusane
5 Ubuciko bodonga
7 Udonga lwezibani
8 Ifenisha yokusiza ebuyiselwe
I-Las izembozo zomqamelo Zingaba lula kakhulu ukuzenza noma zibe banzi, ngokuya ngokuthanda kwakho. Futhi ngaphezu kwakho konke, ngokwezifiso kakhulu. Futhi, akudingeki ukuthi uthenge amakhushini amasha, vele ususe izembozo ezindala noma umboze amakhushini ngokwawo.
Amakhushini ayasebenza kakhulu futhi, ngaphezu kwalokho, amafayela we- embhedeni kuzoba kuhle kakhulu. Ungaba nokuningi njengoba ufuna. Ungashintsha futhi izembozo ukuze zivumelane nesikhathi sonyaka noma imicimbi ofuna ukuyigqamisa emhlobisweni, njengoKhisimusi, i-Halloween, uSuku Lwezithandani, njll.
Uma usebenzisa amakhethini futhi zenzele wena. Kulula ukushintsha futhi kungahlanganiswa nezinye izinto zokuhlobisa zendwangu, kufaka phakathi izembozo zomcamelo. Yize ukuwashintsha kuthatha umsebenzi omncane, futhi ungakwenza ngokwesikhathi sonyaka noma lapho ufuna ukunikeza igumbi lokulala umoya ohlukile.
I-headboard yombhede nayo iyi- umhlobiso wekamelo lokulala ukuthi ungazenzela. Ungakwenza ngezindwangu ukufanisa ezinye izinto, usebenzise izinto ezenziwe kabusha, ukhethe izinto zokhuni, njll.
Okunye Isici sokuhlobisa se-DIY ongazenzela sona yizibani, kokubili uphahla nezinye izinsiza zethebula. Ungayihlanganisa kalula nezinye izinto ozidalile noma nezinye ozithengile, noma umane usebenzise izinto eziphikisayo. Ungasebenzisa imicu yemvelo noma izinto ezenziwe kabusha, kanye nezindwangu nezinye izinto ezinhle kakhulu, uma ufisa.
Sithi ubuciko bodonga ngoba leli gama lifanelana nanoma yini ongayilengisa, kusukela emidwebweni kuya ezithombeni kuya emifanekisweni yendwangu, ukwakhiwa kwensimbi, ukwakheka kweJomethri, amagoda ezimbali, abadonsa amaphupho, noma yini enye ongayicabanga, njengezinto ezinabile. ezintweni ezenziwe kabusha. Ungadlala ngezimo, izinto ezisetshenziswayo futhi nangezibani.
Izinkukhu ziyizinto zokuhlobisa ezisiza kakhulu. Ekamelweni lokulala, ngokuya ngobude nokuma kwawo, angasebenza njengamashanguzi, njenge element asizayo ukuhlala phansi noma ukushiya izingubo ozokugqoka. Futhi ungazenzela wena. Kumele ukhethe isitayela bese uqala ukusebenza.
Esikhundleni sokusebenzisa amalambu asizayo noma njengomphelelisi walokhu ungakwazi beka amapheshana wama-light amancane odongeni ilenga kahle, kahle phakathi kwefenisha nezinto zokuhlobisa ekamelweni lokulala. Ungafinyelela imiphumela emnandi futhi wakhe isimo esihle.
Ifenisha yokusiza ebuyiselwe
Ungakwazi buyisela ifenisha yasendulo futhi ubanikeze ukubukeka okuthanda kakhulu. Ungabanika umoya wanamuhla noma ojwayelekile, noma ubabuyisele ngesitayela sokuvuna. Unezinketho eziningi, kusuka emashalofini kuya kumatafula asembhedeni, udlula ezibukweni, emashalofini odonga noma ezintweni ezilenga, amatafula asemaceleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Imisebenzi yezandla yasekhaya » Imibono yokuhlobisa ye-DIY yamakamelo okulala